စောမွန်လှ - ဝီကီပီးဒီးယား
စောမွန်လှ သည် ပုဂံခေတ် အနော်ရထာမင်း၏ မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် စောမွန်လှကို ချောမောလှပမှုနှင့် အခြားမိဖုရားများ၏ ကုန်းချောမှုကြောင့် ပုဂံနန်းတော်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသူအဖြစ် သိကြသည်။ သူမ၏ ဇာတ်လမ်းမှာ မြန်မာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် ကျော်ကြားနေဆဲဖြစ်ပြီး လွမ်းမောဖွယ်ရာ ချစ်ဇာတ်လမ်းအနေဖြင့် တင်ဆက်ကြသည်။
စောမွန်လှသည် ပုဂံနှင့် နန်ချောင်နိုင်ငံ (ယခု ယူနန်ပြည်နယ်) အကြားတည်ရှိသော မောရှမ်းပြည် စော်ဘွားကြီး၏ သမီးဖြစ်သည်။ သီပေါနှင့် သိန္နီတို့၏ ဒေသခံပုံပြင်များတွင် စောမွန်လှကို သီပေါမင်းသမီး၊ သိန္နီမင်းသမီးအဖြစ် ဆိုကြသည်။
အေဒီ ၁၀၅၈ ဝန်းကျင်တွင် အနော်ရထာမင်း နန်ချောင်နိုင်ငံ မြို့တော်တာလီမှအပြန်တွင် အစ်ကိုဖြစ်သူက နှမတော်အား အနော်ရထာမင်းထံ ဆက်သခဲ့သည်။ မောနယ်သည် ယခင်က နန်ချောင်ဩဇာ သက်ရောက်သောနယ်မြေဖြစ်သော်လည်း အနော်ရထာလက်ထက်တွင် ပုဂံနိုင်ငံတော်၏ ဩဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းကြီးသည် စောမွန်လှကို ချစ်မြတ်နိုးအရေးပေးခဲ့သည်။ စောမွန်လှသည် မြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်များကို နားတောင်းကွင်း၍ ဝတ်ဆင်ပူဇော်ထားရာ ညအချိန်တွင် ဓာတ်တော်များကွန့်မြူးသည်ကို စောမွန်လှအပေါ် မနာလိုသော မိဖုရားအချို့က စောမွန်လှသည် စုန်းတောက်စားသည်ဟု ဘုရင်ထံ ကုန်းချောခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြင့် စောမွန်လှသည် အနော်ရထာမင်းနှင့် မသင့်မတင့်ဖြစ်လာပြီး မောပြည်နေပြည်တော်ဖြစ်သည့် စယ်လန့်သို့ ပြန်လာသည်။ လမ်းတွင် ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကူးချိန်တွင် နားတောင်းကျရာ၌ ဘုရားတည်ပြီး မုခ်ပေါက်ဝကို ရှမ်းပြည်ဖက်လှည့်ထားသည်။ အနော်ရထာမင်းကြီးကြားသိချိန်တွင် အထောက်တော်များအား စေလွှတ်ပြီး မုခ်ပေါက်ရှမ်းပြည်ဖက်လှည့်ထားပါက စောမွန်လှအားသတ်ရန်၊ ဗမာပြည်ဖက်လှည့်ထားပါက မသတ်ရန် စေလွှတ်လိုက်သည်။ ယင်းသတင်းကို စောမွန်လှကြားသော် သစ္စာပြုပြီး မုခ်ပေါက်ကို ဗမာပြည်ဖက်လှည့်စေရန် အဓိဋ္ဌာန်ပြုလိုက်သည်။ သို့ဖြင့်မုခ်ပေါက် ဗမာပြည်ဖက်ရောက်သွားသည်ဟု ပါးစပ်စကားဆိုကြသည်။ အဆိုပါဘုရားကို ရွှေစာရံစေတီဟုခေါ်ပြီး မန္တလေးမြို့ပြင် အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
နတ်နန်းအတွင်းမှ စောမွန်လှ ရုပ်တု
သီပေါမြို့အနီးတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော စောမွန်လှသည် နတ်ဖြစ်ကာ ဘုရားစေတီကို စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသည်ဟု အချို့က ယုံကြည်ကြသည်။ ရွှေစာရံစေတီအနီးတွင် စောမွန်လှ၏ နတ်နန်းတည်ရှိပြီး သူမနှင့် အစ်ကိုတော်တို့၏ ရုပ်တုများ ရှိသည်။
↑ Takatani, Michio. "On Narrative Formation of Spirit Legends in Burma (Myanmar)". Hiroshima University. Archived 22 July 2011 at the Wayback Machine.
မြောက်ပြင်သည် မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
c. ၁၀၅၈–c. ၁၀၇၁ ဆက်ခံသူ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စောမွန်လှ&oldid=706822" မှ ရယူရန်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။